Ku qaabee xayeysiin muuqaal ah Photoshop tallaabo tallaabo ah | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadee naqshad xayeysiin ah Photoshop tallaabo tallaabo ah
Pablo Gonder | | Design Graphic, Photoshop, Tababarada
Ku naqshadeyso garaaf xayeysiis Photoshop Waa wax maanta loo sameeyo si isdaba-joog ah sababtoo ah faa'iidooyinka waaweyn ee ay bixiso barnaamijkan dib u soo celinta sawir heer sare ah oo noo ogolaanaya inaan wax walba u qabanno sidii aan ahaan lahayn oo kale saaxirad dijitaal ah. Tayada garaafka ee aan gaarno waxay ku xirnaan doontaa heerkeenna barnaamijka iyo ujeedkeenna xagga garaafka ah. Marar badan waxaan raadin doonnaa naqshad fudud iyo marar kale oo adag oo ka sii faahfaahsan.
Arrintan post waxaan abuurnay a yar oo garaaf ah oo garaaf ah oo loogu talagalay Netflix, jaantuskan waxaa horey loo abuuray iyadoo qayb ka ah a post ku saabsan sida loo abuuro xayeysiin wax ku ool ah, tan marka hore post waxaan diiradda saareynaa qeybta teori-doonka ah hadana waxaan diirada saari doonaa qeybta wax ku oolka ah.
Waxaan u soconaa samee garaafka in aan kor ka arki karno, sida aan u aragno kan luqadda garaafka in aan u isticmaalnay xayeysiintayada garaafka waa sawirka, soo dhawaanshaha (PP) ee ku saabsan indhaha oo leh wareegyo madow iyo bilicsanaanta codku ka soo baxayo oo aamusinaysa a calool xumo. In kasta oo ay umuuqato mid adag in la sameeyo, way fududahay.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah sawir qaado, waxaan u isticmaali karnaa mid ka mid ah Internet ama si toos ah sawirrada annaga lafteenna u qaadanno. Habka ugu fiican ee kiisaskan waa in la isticmaalo a Internet in yar la sameeyo sawir dijitaal ah waxa aan dooneyno inaan sameyno iyo sida aan u sameyn karno, iyadoo sawirkan aan ku arki doono a kudhowaad fikradeena ugu dambeysa. Sawir qaadis marwalba waa in la qorsheeyo in si sax ah loo sameeyo, isticmaalka sawir gacmeed ama qalab dijitaal ah had iyo jeer waa caawimaad weyn.
Waxaan raadineynaawaa sawir
Waxaan diyaarinaynaa kulan sawir ah (haddii aan rabno alaabteena)
Waan furannaa sawirkayaga ku jira Photoshop
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ku qabanno Photoshop es samee dokumenti cusub. Xaaladdan oo kale waxaan abuurnay dukumenti cabbirro gaar ah leh laakiin waxaad ku cabbiri kartaa cabbiraadaha kale ee ku habboon fikraddaada. Ku habboon ayaa ah xushmee qaraarka, qaabka midabka (RGB haddii ay u tahay digital CMYK haddii ay tahay daabacaad) iyo muuqaalka midabka. Waxaan u abuurnay dukumiintiga magac leh si aan ugu shaqeyno sida ugu macquulsan uguna macquulsan ugana baxno talaabada xigta.
Ka hor intaadan beddelin cabirka sawirkeenna waa mid aad loogula talin karo u rog Shay aan u qalmin, sidan ayaan uga fogaaneynaa sawirkaas lumiso tayada hagaajinta mustaqbalka ayaan ku sameyn doonnaa.
Waxa xiga ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah fur sawirkeena una gudbi dukumintiga cusub. Marar badan sawirkeennu ma waafajinayo cabbirka dukumintiga sidaa darteed waa inaan la qabsanno cabir sawirkeena con Photoshop. Wixii cabir beddel sawirkayaga waxaan ku riixnaa toobiye xakamaynta + T ama tag tabta sare ee Photoshop wax ka beddel + isbeddel bilaash ah. Si tartiib tartiib ah ayaan u hagaajineynaa sawirkeenna oo aan uga tagnaa sida aan u jecel nahay.
Ka dib markii sawirka la hagaajiyo, waxa xiga ee aan sameyno waa inaan ka bilowno Dib u cusbooneysiinta sawirka.
Waxaan ku ciyaari doonnaa qalabka soo socda ee Photoshop:
Lakabka hagaajinta gooladaha
Lakabka isku dheelitirka
Qalooca isku hagaajinta lakabka / isku dhufashada qaabka lakabka
Waxaan baran doonaa fikradaha soo socda:
Madoobaa sawir qalooca wax laga beddelay
Ku shaqee lakabyada hagaajinta
Codso hooska dhibcaha gaarka ah
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno waa abuurista a lakabka hagaajinta gooladaha si loo bilaabo mugdiga muuqaalkeena.
1 1. Abuur lakabka hagaajinta gooladaha
2 Lakabka isku dheelitirka maskaxda
3 3-Codso hooska dhibcaha oo leh lakab isku dheelitir ah oo qaab isku-dhejis ah
1. Abuur lakabka hagaajinta gooladaha
Waxaan riixnaa ah astaanta hoose laga bilaabo aagga lakabka oo dooro xulashada gooladaha, lakab cusub ayaa si otomaatig ah loogu abuuri doonaa dusha sawirkeena asalka ah.
Waxaan wax ka beddeleynaa qodobbada lakabka hagaaji qalooca markaad fiirineyso sawirka si aad uhesho taabashada aan raadineyno.
Lakabka isku dheelitirka maskaxda
Waxaan abuureynaa a lakabka hagaajinta Adag si aan hoos ugu dhigno midabka muuqaalka sawirkeenna, qaabkan waxaan dooneynaa inaan ku abuurno sawir cod duller si looga dhigo wax calool xumo badan.
Waxaan bedeleynaa boqolkiiba midabka jecelnahay, raadinta in aan ka turjumno ujeeddadaas aan horay u qorsheynnay. Markaan tan helno, waxaan ku dabaqi doonnaa hooska gaarka ah.
3-Codso hooska dhibcaha oo leh lakab isku dheelitir ah oo qaab isku-dhejis ah
Waxaan abuureynaa a lakabka hagaajinta gooladaha caadiga ah ka dibna aagga qaabka cape waxaan dooranay isku dhufasho, markii aan sidan yeelno muuqaalkeennu wuxuu noqonayaa mid mugdi badan, si looga fogaado tan waxaan riixaa toobiye xakamee + I
Ka dib markaad riixdo toobiyegan sawirkeenu wuxuu ahaan doonaa sidii uu ahaa bilowgii, oo la qabtay Photoshop waa inuu ka tago saameyn aan muuqan hadhow annaga go aan ka gaadhno meelaha aan dooneyno inaan isbeddelada ku sameyno.
Hadda oo aan diyaarinnay lakabkeenna hagaajinta, waxa xiga ee ay tahay inaan sameyno waa inaan wax ka beddelo xuduudaha burushkayaga si aan u awoodno abuuro hooska (wareegyada madow) sawirka sida ugu macquulsan. Si tan loo sameeyo waan awoodnaa arag sawirrada wareegyo mugdi ah Internet si aan fikrad uga helno sida dhabta ah ee ay yihiin.
Waxa caadiga ah waa in hoos loo dhigo caday adag, xoog iyo xoog sida ugu macquulsan ee tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah looga dhigo natiijada Haddii aan riixno X furaha podemos burushka roga sidaas awgeed in la tirtiro halkii la isticmaali lahaa hooska.
Markaan tan helno tan waxaan u gudbi karnaa barta ugu dambeysa ee tan sawirada xayeysiinta: codso astaan ​​iyo qoraal. Qaybtani waa ikhtiyaari ikhtiyaar ah waxayna kuxirantahay waxa aan raadineyno, xaaladdan wixii aan sameynay ayaa ahaa mid lagu dabaqay astaanta Netflix ku xiga in yar oo uu khadka qaabeynta.
Tallaabadan ugu dambeysa waxaan u adeegsanay qalab isku mid ah ka badan tallaabooyinkii hore: beddel, mugdi iyo buuxin.
Si ka dhakhso badan ama ka yar laakiin iyada oo aan lumin tayada iyo hal-abuurka Waxaan abuurnay qaab xayeysiis ah oo sifiican ula kulmaya ujeeddooyinkii horey loogu dejiyay wajiga fikirka. Photoshop waa qalab aad u fiican oo kuu oggolaanaya inaad sameyso tiro aan xad lahayn oo taabasho ah sawir yaab leh, sirta lagu xakameynayo waa in si joogto ah loo isticmaalo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Naqshadee naqshad xayeysiin ah Photoshop tallaabo tallaabo ah
Pablo Gonder dijo
Waan ka xumahay qormada cinwaanka boostada, waxaan dhigay xayeysiin halkii aan xayeysiin lahaa. Cilad yar markii aad soo dejineyso mid ka mid ah sawirrada.
Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay boostada!
Jawaab Pablo Gonder
Mustaqbalka moodada gacanta ee gacanta kula jira daabacaadda 3D